पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोली आउँदै, दैलेख र पाल्पाका १० स्थानमा अनुसन्धान - Birgunj Sanjalपेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोली आउँदै, दैलेख र पाल्पाका १० स्थानमा अनुसन्धान - Birgunj Sanjalपेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोली आउँदै, दैलेख र पाल्पाका १० स्थानमा अनुसन्धान - Birgunj Sanjal
पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोली आउँदै, दैलेख र पाल्पाका १० स्थानमा अनुसन्धान
२ आश्विन २०७६, बिहीबार ०७:४९
काठमाडौं । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यक्रमको लागि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल यही सेप्टेम्बर महिनामा नेपाल आउने भएको छ । यसअघि गएको जुन महिनाको अन्तिम साता नेपाल आएको टोलीले दैलेख र पाल्पामा एकसरो अध्ययन गरेको थियो । अब आउने टोलीले दैलेखमा ड्रिलिङ्गको काम नै गर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।
उनको भनाइ थियो,‘‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामान आइसकेका छन् । उहाँहरु पनि यही सेप्टेम्बरमा आउनुहुनेछ ।’’महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार अहिले आउने टोली दैलेखमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ । उनले भने,‘‘यो सम्बन्धी काम आगामी डेढ वर्षसम्ममा सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।”गएको जुन महिनामा आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दुवै स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
सन् २०१६मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीन भ्रमण गर्दा नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण सम्बन्धी सहयोगका बारेमा सहमति भएको थियो ।
सोहीअनुसार गएको फेब्रुअरी २८ तारेखका दिन दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सापकोटा र चीनको तर्फबाट चाइना जियोलोजिकल सर्भेका उपाध्यक्ष वाङ्ग कुनबीच ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना–एड अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेज सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ विषयमा सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अवधि तीनवर्षको रहेको उल्लेख छ । सम्झौतामा चीनको विज्ञ टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गत १० महिनामा तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्भे गर्ने तथा दोस्रो चरणमा ११ देखि २८ महिनासम्ममा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि तेस्रो चरणमा २९ देखि ३६ महिनाको बीचमा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने उल्लेख छ ।
जसअनुसार ती क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निस्कने अवस्था भयो भने सो सम्बन्धी परियोजनामा चीन सरकारले सहयोग गर्नेछ । दैलेख र पाल्पाका १० स्थानमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भावना रहेको यसअघिका अध्ययनहरुमा देखिएको थियो ।